मध्यरातमा नेकपा चितवनको कार्यालयमा प्रहरी आक्रमण, इन्चार्ज घाइते – www.janabato.com
२७ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०६:०३ June 10, 2018 Janabato Online
चितवन /नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चितवन जिल्ला कार्यालयमा प्रहरीले आक्रमण गरी सम्पूर्ण सामाग्रीहरु कब्जा गरेको छ । भरतपुर महानगरपालिका १० पारस बसपार्क स्थित उक्त कार्यालयमा शनिबार मध्यरातमा प्रहरीले आक्रमण गरेको हो ।
प्रहरीको आक्रमणबाट नेकपा चितवनका इन्चार्ज लालबहादुर बिसी घाइते भएका छन् । प्रहरीले नेकपाको उक्त कार्यालयबाट बिरु तामाङलाई पक्राउ गरेको छ । साथै, प्रहरीले कार्यालयका कागजातहरु, एक लाख नगद, एक थान कम्प्युटर, ६ सेट मोवायल, कापी, किताब, डायरी र लगाउने कपडा समेत कब्जा गरी लिएको नेकपा चितवनले जानकारी दिएको छ ।
नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज बिसीले बिनाकारण राजनैतिक आस्थाकै आधारमा नेकपाको कार्यालयमाथि आक्रमण गरिएको बताएका छन् । उनले मध्यरातमा प्रहरीले आफ्नो कार्यालयमा आक्रमण गरेको घटनाको निन्दा गर्दै पक्राउ गरिएका विरु तामाङलाई तत्काल रिहाई गर्न माग गरेका छन् ।
साथै, बिसीले दैनिक उपभोग्य सामानहरु समेत कब्जा गरेर लिएको भन्दै सम्पूर्ण सामान फिर्ता गर्न पनि माग गरेका छन् ।
← जनप्रतिनिधिसभा पाल्पाको दोस्रो अधिवेशन सम्पन्न
नीति, कार्यक्रममाथि ५ नं. प्रदेश सांसदहरु कसले के भने ? →
२ पुष २०७४, आईतवार ०४:३८ Janabato Online Comments Off on विचार र कलाको संयोजन :जनघोष मासिकको नयाँ अङ्क बजारमा
एमालेले देखायो असली रूप
२० बैशाख २०७५, बिहीबार ११:०५ Janabato Online Comments Off on एमालेले देखायो असली रूप
नाकाबन्दीका कारण कतारबाट फर्कदैछन् सयौं नेपाली
८ मंसिर २०७४, शुक्रबार ०३:०३ Janabato Online Comments Off on नाकाबन्दीका कारण कतारबाट फर्कदैछन् सयौं नेपाली